Intsimbi ecwebezelayo exwebula matshini abavelisi - China yokuchonga exwebula matshini oomatshini factory & ababoneleli
Buhle uyaxobuka Kwaye Cutting ...
Yokuluka iinkuni umatshini exobuka umatshini izixhobo ezingundoqo kwimveliso ngamaplanga, nto leyo exobulayo log ibe ngokwenene ngendlela ezinzileyo kwaye ichaneke ngakumbi. Ingasetyenziselwa ukuchuba iintlobo ezahlukeneyo zemithi enobubanzi obukhulu. Ukutyeba kwe-veneer eveliswe ngulo matshini kufana ngakumbi kwaye umphezulu ubuthelezi ngokuthelekisa umatshini wokuxobeka ongenawo. Ngenxa yokuchaneka kokuphakama kubuninzi boomatshini abasetyenziselwa ukucheba ubuso, nto leyo ethetha ukuba ubukhulu be-veneer buncinci. Kodwa inokusetyenziselwa ukuvelisa i-veneer ephezulu. Zombini zifumana iziphumo ezilungileyo.
2700mm spindleless ngesantya esiphezulu iinkuni ngokwenene ukuveza umatshini na umsebenzi onzima log uyaxobuka lathe, sebenzisa for hardwood kunye softwood zombini, ezifana zomgamtriya, ezinde, ipayina kunye poplar. Umgangatho we-veneer esiwufumanayo uya kuba ngamacala amabini agudileyo kwaye ubukhulu baya kuba kuyo yonke indawo. Ngokwemfuno zabathengi, sinokwenza imodeli yesantya esimiselweyo kunye nemodeli enokuhlengahlengiswa ngesantya. Zombini ezi modeli zisebenza kakuhle kwaye zincoma abathengi.
Lo matshini uyaxobuka 8ft uthengiswa ikakhulu eTurkey, eIndonesia, eRashiya naseMelika nakwamanye amazwe. It’Baye banconywa kakhulu ngabo bonke aba bathengi. Sinezatifikethi ze-CE. Kwaye i-SGS iya kubonelelwa xa kufuneka umthengi.
Siyaleza ikakhulu imodeli yethu entsha spindleless umatshini exobuka, imodeli roller lokuqhuba kabini. Xa kuthelekiswa nomatshini othini wokugawula iinkuni, oku kuluncedo kumatshini kukuba iinkuni ezincinane ezinobungakanani azinangxaki yokuxobula kwaye kulula ukusebenza kunye nokukhawuleza isantya kuyakhawuleza.